ဘဝကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်အောင် အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်မှာ လုပ်ရမယ့်အရာ (၂၄)ခု - Lifestyle Myanmar
အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်ဟာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အသက် ၂၀အရွယ်ဆိုတာ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေယူပြီး အမှီအခိုကင်းကင်းနှင့် စတင်ရတော့မယ့်၊ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ် အားအင်အပြည့်နဲ့ စလျှောက်လှမ်းရတော့မယ့် အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်မှာ လူငယ်တိုင်းက ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ မတူညီစွာ ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်တွေက ကျွန်မတို့အတွက် ဘာမှမဟုတ်သလို ခံစားရစေပေမယ့် ခက်ခဲခဲ့ကြပါတယ်။
လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် တာဝန်တွေပိုလာပြီး ခက်ခဲလာတာကြောင့် ကျွန်မတို့ဟာ အဲ့ဒီနှစ်တွေကို မြန်မြန်ကျော်သွားချင်မိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးသူ တစ်ယောက်ယောက်က သူတို့ရဲ့အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်ကို အပြည့်အဝ မခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် နောင်တရတယ်လို့ ပြောတာ ဘယ်နှစ်ခါ ကြားဖူးပါသလဲ? ကျွန်မတော့ အများကြီး ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အရင်အချိန်တွေကို ပြန်သွားလို့ရရင် သွားချင်ကြတဲ့ ၊ဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ပျော်မွေ့ချင်ကြတဲ့ အသက် ၆၀ကျော်အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်တဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေါ်က ဗီဒီယိုလေးကို ကျွန်မကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတိပေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ သင့်ရဲ့အသက် ၂၀အရွယ်မှာ ဘယ်လိုပျော်အောင်နေထိုင်မလဲ? အသက်၃၀အရွယ်မှာ ဘဝကို ဘယ်လိုခံစားမလဲ? ဆိုတဲ့ အသက် ၂၀၊ ၃၀အရွယ်မှာ လုပ်ရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဒီနေ့မှာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
“ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ခံစားရစေဖို့ အသက် ၂၀, ၃၀အရွယ်မှာ လုပ်ရမယ့်အချက်များ”
၁။ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေနှင့် အကောင်းဆုံးစရိုက်တွေ အားလုံးနှင့်အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြည့်အဝလက်ခံဖို့ သင်ယူပါ။
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခြွင်းချက်မရှိ ချစ်ပါ
၃။ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး အားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
၄။ ခရီးအများကြီးသွားပါ၊ လူအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံပါ။ ကွဲပြားခြားနားသော ယဉ်ကျေးမှုတွေ, ယုံကြည်မှုတွေ, ဘဝလမ်းစဉ်တွေနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ပါ။
၅။ တောင်တတ်ခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ ခြေလျင်ခရီးစတဲ့ adventures တစ်ချို့ကို စမ်းကြည့်ပါ။
၆။ တစ်နေ့ မိနစ် ၂၀လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းကို ဦးစားပေးပါ။
၇။ ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုကို ရှာနိုင်တာကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ငွေရေးကြေးရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ် ချမှတ်ပါ။
၈။ အသားအရေကို အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဒီနေ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာက နောက်ပိုင်းမှာ သိသာပါလိမ့်မယ်။
၉။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝယ်ယူပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ self-esteem ကိုလည်း တိုးစေသလို တခြားသူတွေဆီက impression ကောင်းရစေပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ နေ့စဉ် ရေများများသောက်ပါ။ ဒါက သင့်အနာဂတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ ကိုယ်ကာယနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို အကူအညီဖြစ်စေဖို့ တစ်နေ့ ၈နာရီအိပ်ပါ။
၁၂။ သင့်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အစားအစာ၊ အာဟာရ မျှတတဲ့ အစားအသောက် အလေ့အထကို ရှာပါ။
၁၃။ သူများတွေလို ဘော်ဒီအမိုက်စားဖြစ်ချင်သလား လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ပါ။
၁၄။ ချက်ပြုတ်ဖို့ သင်ယူပါ။ ဒါက မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးခြင်းရဲ့နောက်ထပ် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ စာများများဖတ်ပါ။ ဇာတ်ကားကြည့်တာ ၊ဖုန်းကြည့်တာလျှော့ပါ။ ဗဟုသုတက စာဖတ်ခြင်းကနေလာပါတယ်။
၁၆။ သင့်ဝါသနာကို လေ့ကျင့်ပါ။ ဝါသနာဘာမှမရှိဘူးလား? ကောင်းပါပြီ၊ တစ်ခုလောက်ရှာကြည့်ပါ။
၁၇။ သင့်ကို စိတ်ဓါတ်ကျစေသူ(သို့) သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားသူတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။
၁၈။ သင့်ရဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေအားလုံးကို မဖြုန်းပါနဲ့။ ဘဝကို ပျော်မွေ့ဖို့ သင်ယူပါ။
၁၉။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းကို ဖက်တွယ်ထားပါ။ သူတို့က အဖိုးမဖြတ်နိုင်သလို တစ်သက်တာလုံး တည်မြဲနိုင်ပါတယ်။
၂၀။ သင်လိုချင်တာကိုရဖို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါ။
၂၁။ အမှားတွေ လုပ်မိတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှားတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွတ်ပါ။
၂၂။ ကိုယ့်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်၊ အဆင်မပြေဖြစ်စေမယ့်အရာ (သို့) ငါလုပ်နေတာမှန်တယ်လို့ မခံစားရတဲ့ အရာမှန်သမျှဆိုရင် “No” လို့ငြင်းနိုင်အောင် သင်ယူပါ။
၂၃။ မိသားစုနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့ ကြိုးစားပါ။
၂၄။ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားတာမျိုး ၊ သင် ဘယ်နေရာကို ဦးတည်နေပြီလဲဆိုတာ စိုးရိမ်တာမျိုးကို ရပ်တန့်ပါ။ ယခုကိုသာ စဉ်းစားပြီး လက်ရှိဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။